दोलखाको मत गणना सम्पन्न, एमाले ७ र कांग्रेस–माओवादी २ स्थानमा विजयी - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
दोलखाको मत गणना सम्पन्न, एमाले ७ र कांग्रेस–माओवादी २ स्थानमा विजयी
आवाज संवाददाता ११ जेष्ठ २०७४, बिहीबार
दोलखा, जेठ ११/स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोलखामा एमालेको वर्चश्व कायमै देखिएको छ । दोलखाको २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका मध्ये अधिकाशंमा एमालेले जित हासिल गरेको छ । विहिवार भएको मतगणनाको परिणाम अनुसार नेकपा एमालेले भीमेश्वर नगरपालिका, जिरी नगरपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका, तामाकोसी गाउँपालिका, कालिञ्चोक गाउँपालिका र मेलुङ गाउँ पालिकामा जित हात पारेको छ । यस अनुसार एमालेले २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा जित हासिल गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धनले वैत्यश्वर गाउँ पालिका र विगू गाउँ पालिकामा मात्र जित हासिल गरेको छ । यी दुई गाउँपालिकामा काँग्रेसको अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष निर्र्वािचत भएका छन् ।
जिरी नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयर टंक जिरेल र उपमेयर कृष्णकुमारी बुढाथोकी निर्वािचत भएका छन् । त्यस्तै शैलुङ गाउँपालिकामा एमालेकै अध्यक्षमा भरत दुलाल र उपाध्यक्षमा लालमाया तमाङ विजयी भएका छन् । गौरीशंकर गाउँपालिकामा अध्यक्षमा सोयमबहादुर खड्का र उपाध्यक्षमा उर्मिला थामी विजयी भएका छन् । तामाकोसी गाउँपालिकामा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल र उपाध्यक्षमा उर्मिला खड्का निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी कालिञ्चोक गाउँपालिकामा एमालेवाट अध्यक्ष विनकुमार थामी र उपाध्यक्षमा कालिका पाठक विजयी भएका छन् । भीमेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा भरत केसी र उपमेयरमा कमला बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । वैत्यश्वर गाउँपालिकामा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका छवि लामा र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका रविचन्द्र आचार्य विजयी भएका छन् । त्यस्तै विगु गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका युधिष्ठिर खड्का र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका सञ्जिव ओली निर्वाचित भएका छन् ।
बैशाख ३१ गते भएको मेलुङ गाउँपालिकाको मतदानको क्रममा मतपेटिका तोडफोड भएकोमा निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । सो गाउँपालिकामा एमालेका नरबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्षमा र कल्पना भण्डारी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । आजबाट दोलखाको ७४ वटा वडाको मतगणना पूरा भएको छ । यससँगै एमालेले ४३ नेपाली काँग्रेसले २० वटा र माओवादी केन्द्रले ११ वटा वडामा जित हासिल गरेको छ ।
मेलुङ गाउँपालिकामा पनि एकालेकै जित
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा आज सम्पन्न भएको मत गणनासंगै अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित चार वटा वडाहरुमा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् ।
अहिले भर्खरै सम्पन्न मतगणनाअनुसार एमालेका नरबहादुर श्रेष्ठले कांग्रेसका बर्मा लामालाई ८९ मतले पछाडि पार्दै विजय हासिल गरेका हुन् । उपाध्यक्ष पदमा एमालेकै कल्पना भण्डारीले माओवादी केन्द्रका कृष्ण कार्कीलाई ६ सय मतान्तरले विजयी भएकी छन् । गत बैशाख ३१ गते उक्त पालिकाको वडा नं. १ स्थित पवटी केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको थियो । जेठ ७ गेत निर्वाचन भएपछि मतगणना सुरु भएको थियो । उक्त पालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ७ मा एमाले, ४ र ६ मा कांगेस र ५ माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष जितेको छ । त्यहाँ कांग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो ।